Yintoni Yokujonga KwiKholeji: 15 Iinkalo ezibalulekileyo
Sonke sibone uluhlu lwe-US News & World Report, i-Petersons, i-Kiplinger, i-Forbes, kunye nezinye iinkampani kwishishini leikholeji zezinga eliphezulu. Ndinezikhetho zam iikholeji ezilungileyo , iifunivesithi , iifunivesithi zikawonkewonke , izikolo zoshishino , kunye nezikolo zobunjineli . Ezi zikhundla zonke zinenani elithile - zivame ukumela izikolo ezineenkcukacha eziqinileyo, izibonelelo ezininzi, amaxabiso aphezulu okugqitywa, ukuxabiseka, kunye nezinye izinto eziphawulekayo.
Oko kwathiwa, akukho simo selizwe esingakuxelela ukuba ikholeji okanye iyunivesithi yinto efanelekileyo kakhulu kumdlalo. Iminqweno yakho, ubuntu, iitalente kunye neenjongo zemisebenzi yenza nayiphi na indawo inokuthi ingasebenzi.
Eli nqaku libandakanya iimpawu ezili-15 omele uziqwalasele xa ukhetha iikholeji okanye iyunivesithi. Iyokuqala kukuthandwa kwesikolo ngokwayo. Iimpawu ezibonakalayo, kodwa zifuna ukuba uye esikolweni oqhayisa kuzo. Ukuba iiklasi zakho zibanjwe kwisakhiwo esiqhekezayo esiphunga njengentlanzi efile, iingxaki zomzimba zesikolo zinokuba luphawu lweengxaki ezinzulu. Isikolo esinempilo sinemithombo yokugcina izibonelelo zayo.
Ireyithi ephakamileyo yokugqiba
Kukho iikholeji ezineemfundo zonyaka ogqityiweyo kwimali enye. Ireyithi ye-30% ayikho into engavamile, ingakumbi kwiiyunivesithi zikarhulumente zoluntu.
Ukuba usebenza kwiikholeji, mhlawumbi umgomo wakho kukufumana iqondo lekholeji. Ezinye izikolo ziphumelele kakhulu kubafundi abaphumelele kunabanye. Ukuba uninzi lwabafundi abakwiikholejini abaphumelelanga kwiminyaka emine (okanye bangaphumelelanga naphakade), ngoko uninzi lwabafundi bachitha imali eninzi ngenjongo yokubagxotha.
Xa ubala iindleko ze-college degree, kufuneka uthabathe izinga lokugqitywa kwezibalo. Ukuba abaninzi abafundi bathatha iminyaka emihlanu okanye emithandathu ukuba baphumelele, akufanele uhlahlo-mali iminyaka emine yokufunda. Ukuba ngaba abaninzi abafundi abagqityi ngokugqibeleleyo, akufanele ucebise ukunyuka okuzuziweyo ngenxa yezinga lakho lekholeji.
Oku kuthethi, qinisekisa ukuba ubeka amazinga okugqwesa kwisifundo. Kukho izizathu ezilungileyo zokuba kutheni ezinye izikolo zibe nezinga eliphezulu lokugqwesa izifundo kunabanye:
Iikholeji ezikhethileyo zibhalisa abafundi abaye balungelelanisa kakuhle umsebenzi wekholeji. Aba bafundi banokuphumelela kwaye, ekuqhutyeni inkqubo, bakhulisa izinga lokugqweswa kweminyaka emine yekholeji. Iikholeji evuma abafundi abaqeqeshwayo ngokucetyiswa kweekholeji abanalo le nzuzo.
Iinkqubo zobungcali kwiinkalo ezinjengobunjineli, uongikazi kunye nemfundo kunokwenzeka ukuba kuthathe iminyaka emihlanu kunamanye amaninzi kwimimandla yobuntu, isayensi kunye nezesayensi zentlalo.
Amanyunivesithi amaninzi karhulumente anenani elikhulu labafundi bokuhamba, abafundi abasebenzayo kunye nabafundi abaneentsapho. Iimfuno zale bafundi zidla ngokugqiba iminyaka emine.
Iikholeji ezinezicelo ezivaliweyo ezivakalayo okanye ukungenayo okukhethiweyo ziza kuba namazinga aphantsi okugqiba. Ezi zikolo zinika indima ebalulekileyo ngokwenza iikholeji kufinyeleleke kubo bonke. Ngethuba elifanayo, baya kuthi baqeqeshwe ngabafundi abangenakulungelelwanga ngokupheleleyo kwiimfuno zabafundi beekholeji.
Umfundi oPhantsi / uFundo lweZakhono
Isilinganiselo somfundi / isisombululo sibaluleke kakhulu ekuqwalaseleni xa sijonga iikholeji, kodwa yinto encinane yedatha elula ukuyichaza ngokucacileyo. Ngokomzekelo, iCalifornia Institute of Technology , umzekelo, inomlinganiselo we-3 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty. Oku akuthethi ukuba kunjalo, ukuba abafundi banokulindela ubungakanani beklasi yobukhulu be-3. Akuthethi ukuba abafundisi bakho baya kuba nesithakazelo nakakhulu kubafundi abagqwesileyo kwizifundo zabafundi abagqibeleleyo.
Ininzi yeekholeji eziphakamileyo kunye neeyunivesithi zinamanani aphantsi / abafundi abaphantsi. Nangona kunjalo, zikwazo izikolo apho uphando oluphezulu kunye nokulindelwa kweencwadi lubekwe kwiziko. Ngenxa yoko, i-faculty ijwayele ukufundisa izifundo ezimbalwa kunezikolo apho uphando luxabiswa ngaphantsi kwaye ukufundisa kubaluleke kakhulu. Uyakwazi ukufumana ukuba ikholeji ehloniphekileyo njengoWilliam enezinga eli-7 ukuya ku-1 lomfundi / ubuchule bobukhulu bukhulu beeklasi ezingafani kakhulu nendawo efana neKholeji yaseSiena enexabiso eli-14 ukuya kwe-1.
Kwiziko leyunivesithi yophando ngokufanelekileyo, amaninzi amanqanaba e-faculty ayichitha ixesha elide kungekhona nje ngokwabo uphando, kodwa kwaye ejongene nophando lophando. Oku kunika ixesha elincinane ukuba lizinikezele kwizidanga ezidlulileyo kwizifundo ezidlulileyo kwiziko kwiziko lokubhalisisa.
Nangona ufanele uguqule umlinganiselo womfundi / ubuchule ngokucophelela, umyinge usho ngokubanzi ngesikolo. Umlinganiselo ophantsi, ubuninzi ukuba ngaba ootitshala bakho baya kukwazi ukunikwa ngqalelo. Xa ufumanisa umlinganiselo we-20/1, uya kufuthi ufumanisa ukuba iiklasi zinkulu, i-faculty iyasebenza ngokugqithiseleyo, kwaye amathuba akho ekusebenzisaneni nomnye kunye nabafundisi bakho ayancipha. Ndicinga ukuba imilinganiselo enempilo ibe ngama-15 ukuya kwe-1 okanye ngaphantsi, nangona ezinye iikoyunivesithi zinikeza umyalelo obalaseleyo ngomlinganiselo ophezulu.
Qaphela ukuba umlinganiselo ubalwa ngokusetyenziswa kwesikhundla esigcwele ixesha okanye ukulingana kwazo (ngoko kubalo amaninzi, abasebenzi abathathu be-1/3 baza kubalwa njengelungu elinye lexesha elifanelekileyo le-faculty member). Izikolo ezahlukileyo ziya kubala inani ngokwenani. Ngokomzekelo, ngaba abafundi beyunivesiti babala abaqeqeshi babafundi? Ngaba isikolo sobungakanani besikolo ababalaseleyo ixesha labo kuphando kunokuba bafundise izifundo ze-undergraduate? Ngamanye amazwi, umlinganiselo womfundi / ubuchule awuyiyo inzululwazi echanileyo okanye engqinelanayo.
Idatha enxulumene neyona nentsingiselo yinkalo yobukhulu beklasi. Lona akusiyo inqaku eliya kuthi zonke iikholeji zenze ingxelo, kodwa kufuneka uzive ukhululekile ukubuza malunga nobukhulu beklasi xa utyelela i-campus okanye uthetha negosa lokumkelwa. Ingaba ikholeji ineeklasi ezinkulu zokufunda? Ziziphi iindibano zeminqanaba ephezulu? Bangaphi abafundi abakwilebhu? Unokufunda ngokubanzi malunga nobukhulu beklasi ngokujonga ikhathalogu yekhosi. Ziziphi iibhaliso eziphezulu kwiindidi ezahlukeneyo zeeklasi?
Akunandaba nokuba ikholeji enkulu kangakanani ukuba awukwazi ukuhlawula. Awukwazi ngokuchanekileyo ukuba isikolo siya kuhlawula phi ufumane i-package yakho yenkxaso yezemali. Nangona kunjalo, xa uphanda iikholeji unokufumana lula ukuba yeyiphi ipesenti yabafundi abafumana uncedo lwegranti kunye nokuba yintoni umlinganiselo ophezulu we-grant aid.
Jonga kwiikholeji zikawonke-wonke nezikarhulumente njengoko uthelekisa uncedo lwegranti. Iikholeji ezizimeleyo ezinezibonelelo ezinempilo zikwazi kakhulu ukubonelela ngoncedo oluninzi kunikezelo lwee-univesithi zikawonkewonke. Xa kunikezelwa uncediso lweenkonzo, umlinganiselo wexabiso phakathi koorhulumente kunye nobutyebi buyehla kakhulu.
Kufuneka ujonge kwakhona umyinge wesilinganiso semali-mboleko abafundi abayithathayo ukuhlawula ikholeji. Gcina ukhumbule ukuba iingxowa-mali zingakukhathaza iminyaka engaphezu kweminyaka elishumi emva kokuba uphumelele. Nangona iimali-mboleko zinokukunceda ukuhlawula ibhilikhi yakho yokufunda, kunokukwenza kube nzima kuwe ukuhlawula umboleko emva kokuba uphumelele.
Abaphathi bezemali kwiikholeji kufuneka basebenze ukukuhlangabeza kwi-point-middle financial point point - kufuneka uzinikezele ukuhlawula imfundo yakho, kodwa iikholeji kufuneka incede kakhulu, ngokucinga ukuba unelungelo lokufumana uncedo. Njengoko uthengela iikholeji efanelekileyo, khangela izikolo apho uvavanyo lwesibonelelo-mali luncedo ngaphezu kwesilinganiso semali mboleko. Kwiikholeji zangasese, inkxaso yegranti kufuneka ibe ngaphezu kwexabiso lemali mboleko. Kwiikholeji zikawonkewonke, amanani angase afane.
Amakhulu eenkcukacha zekholeji kwi-About.com zikhokhwe ngokukhawuleza kwaye zinika ulwazi. Iinkcukacha ezingakumbi zifumaneka kwiwebhsayithi nganye.
Izifundo kunye namaxesha okuPhando
Xa unyaka ophezulu wekholejini ujikeleza kwaye uqala ukufaka izicelo, akukho nto inceda ngaphezu kokuba nezandla ezithile, amava afanelekileyo adweliswe kwi-resume yakho. Njengoko ukhetha iikholeji apho uya kusebenza khona, khangela izikolo ezineenkqubo ezinamandla zokufunda. Ngaba abafundi basekolishi abancedisayo ukuncedisa abaprofeti ngophando lwabo? Ingaba ikholeji ineemali zokuxhasa inkxaso yophando oluzimeleyo? Ingaba ikholeji ikhuthaza ubudlelwane kunye neenkampani kunye nemibutho ekuncedeni abafundi ukuba bafumane izifundo zokufunda zasehlotyeni ezinentsingiselo? Ingaba ikholeji ine-network alumni yenethiwekhi yokuncedisa abafundi ukuba bafumane umsebenzi wehlobo kwiindawo zabo zokufunda?
Qaphela ukuba ama-internship kunye namathuba okuphanda akufanele agqitywe ubunjineli kunye nezesayensi. I-Faculty ebantwini kunye nobugcisa nayo ifuna ukuphanda uphando okanye abancedisi be-studio, ngoko kuyafaneleka ukuba kubuze amagosa angenayo malunga namathuba okufunda nangamava kungakhathaliseki ukuba yiyiphi inkulu enokuyenza.
Amathuba okuhamba kwabaFundi
Masijamelane nayo-amazwe ehlabathi adibanisa ngokungaqhelekanga kwaye angaxhomekekanga. Imfundo imele ifune ukusicinga ngaphaya kweendawo zethu ezikufutshane, kwaye abaqashi bahlala bekhangela abafakizicelo abaye behlabathi, kungekhona kwiphondo. Njengoko ucinga iikholeji epheleleyo, fundela ngamathuba okuhamba kwabafundi kunye neeprogram ezikwiindawo ezifanelekileyo zokufunda ngaphandle . Uhambo luya kufuneka lube sesifundo se-semester okanye sonyaka-nyaka. Ezinye iikhosi ziza kuba neendlela ezincinane ezijoliswe ngexesha lokuphumula.
Eminye imibuzo ekucingayo njengoko ubheka kwiikholeji ezahlukeneyo nakwiiyunivesithi:
Zingaphi ukufundwa kwamanye amazwe kwiikholeji? Ingaba unethuba lokuhamba phantse naphi na kwihlabathi, okanye ngaba ukhetho luphela? Indawo efana neYunivesithi yaseArcadia yenza igama ngokwalo ngeenkqubo zayo eziphambili kunye nezifundo-ngaphandle kwamanye amazwe, kodwa uya kufumana ukuba iikholeji ezininzi ezihloniphekileyo zinokukhetha ezininzi abafundi.
Ukufunda kwamanye amazwe kuxhaswa njani ngemali? Ngaba uya kufumana uncedo lwemali xa ufunda kwelinye ilizwe? Ngaba i-semester ngaphandle kwelinye ixabisa ngaphezu kokuhlala kwikampus yasekhaya?
Ngaba iiklasi ezininzi zihamba izinto? Nantsi e- University of Alfred , umzekelo, sinesikolo sezoshishino ngamazwe onke esiya eJamani kunye nekhosi yase Equestrian ehamba e-Ireland.
Ngaba iikholeji zineenkampu zesebe kwamanye amazwe? I-campus yesebe inokufumana inzuzo ngaphezu kwezinye iindidi zokufunda kwamanye amazwe-iikhredithi zihamba ngokukhawuleza, kwaye uncedo lwezezimali kunye nokuhlawulwa kweenkonzo zihlawulwa ngaphakathi. Ezinye iikampu zesebe ziye zaphumelela ngokuphawulekayo, ezifana ne-Rome campus yaseYunivesithi yaseDallas apho abafundi abangama-80% bafunda.
Bangaphi abafundi abafunda ngaphesheya? Ngokuqhelekileyo kulula ukuxelela ukuba ikholeji yenze i nkcubeko yenkcubeko exabisa ukuhamba ngokubona ukuba yeyiphi ipesenti yabafundi bafunda ngaphandle.
Ngaba iikhredithi ezifunyenwe ngaphandle zihamba ngokulula? Qinisekisa ukuba i-semester phesheya ayiyi kwenza kube nzima ukugqiba ngexesha. Ukuba iikhredithi zekhosi zifunyenwe phesheya zingabuyiselwa esikhungweni sasekhaya, uphando lwamazwe angaphandle luphela luba neendleko ezinkulu ezifihlakeleyo.
Umdwebo kaLaura Reyome weklasi ye-zombie ungabonakala ukhululekile, kodwa inyaniso uya kufumana ootitshala abafundisa ngeZombi kwiYunivesithi yaseBaltimore, iYunivesithi yaseAlabama Birmingham , iYunivesithi yaseAlfred kunye nezinye iikhampasi. Xa sibhekiswe ngokungathí sina, i-Zombies isitsho kakhulu malunga nenkcubeko yangoku, kwaye ukubonakaliswa kwazo kwifilimu kunye neengcamango zineengcambu kwixesha elidlulileyo kunye nobukhoboka.
Ikharityhulam yekholeji, nangona kunjalo, akufuneki ukuba yinto ehambelanayo okanye i-gimmicky yokubandakanya. Njengoko ujonga kwiikholeji, qiniseka ukuchitha ixesha ukuhlola ikhathalogu yekhosi. Ngaba kukho iikhosi ezinikwayo ezikuvuyisa? Ngaba iikhosi eziphambili zenza ingqiqo? - oko kukuthi, ikholeji ibonisa ingqiqo ecacileyo kwimfundo yayo jikelele? Ingaba ikholeji inekharityhulam yonyaka wokuqala wokunceda ukuba wenze utshintsho kwiklasi yekholeji? Ngaba ikharityhulam iphuma kwigumbi lokuthatha izifundo ezikhethileyo?
Ukuba unokuba nengqondo ebalulekileyo engqondweni, jonga iimfuno eziphambili. Ngaba iikhosi ziyakubhalela iinkalo zezifundo ofuna ukufunda? Awufuni ukuya kwikholeji yokufumana ingxelo kuphela ukuba ufumene ukuba isikolo sigxile ngokuthe ngqo ekuthengiseni.
Iiklabhu kunye neMisebenzi yokudibanisa umdla wakho
Uninzi lweekholeji zikhupha inani lamacandelo abafundi kunye nemisebenzi abayinikezayo. Nangona kunjalo, inani, alilona lubaluleke kakhulu njengolu hlobo lwaloo mi sebenzi. Ngaphambi kokukhetha iikholeji, qiniseka ukuba isikolo sakho sinomdla owenziwe ngasemva.
Ukuba umsebenzi ozithandayo ungowama-equestrian (okanye ukukhwela kwe-unicorn), jonga kwiikholeji ezineendawo zazo kunye nezicwangciso. Ukuba uthanda ukudlala ibhola kodwa ayikho into efanelekileyo ye-NFL, unokufuna ukujonga kwiikholeji ezikhuphisana kwizinga leCandelo III. Ukuba impikiswano yinto yakho, qinisekisa ukuba iikholeji oziqwalaselayo zinayo iqela lempikiswano.
Phantse zonke iikholeji zokuhlala zonyaka ezine zineenketho ezibanzi-jikelele kwiiklabhu nemisebenzi, kodwa iikampus ezahlukeneyo zinobuntu obuhlukeneyo. Uza kufumana izikolo ezibeka ukugxininisa kakhulu kwezobugcisa, ukwenza imisebenzi yangaphandle, imidlalo yezemvelo, ukuvolontiya okanye impilo yamaGrike. Fumana izikolo ezizalisekisa iimfuno zakho. Nangona ikharityhulam ingaba yinto ebaluleke kakhulu kwiikholeji, uya kuba neentlungu xa ungenalo ubomi obushukumisayo ngaphandle kwezemfundo.
Iziko leMpilo neZiko loLungileyo
Ngelishwa, loo mahemuhemu oye weva malunga "nomntu omtsha 15" ahlala eqotho. Abafundi abaninzi xa bejongene neentambo zaseFransi, i-pizza kunye ne-soda benza izigqibo ezimbi zokutya kwaye bafaka iipounds.
Kuyinyaniso ukuba xa amawaka abafundi bevela kwihlabathi lonke behlangene kwiiklasi ezincinci kunye neeholide zokuhlala, banokwabelana ngamagciwane amaninzi. Ikholejini ifana nesitya se-petri-kubanda, umkhuhlane, isisu, i-strep, kunye ne-STD ziyakwazi ukusasazeka kwiinkampu ngokukhawuleza.
Ngelixa uzakufumana amagciwane kunye nokutya okunamafutha malunga neklasi nganye, kufuneka ucele imibuzo malunga neziko lezempilo kunye neeprogram zezempilo kunye neeprogram:
Ngaba iihholo zokudlela zihlala zinempilo? Ngaba ukutya okuphekiweyo (kunokuba kuthosiwe) kwaye ibhadi yebhadidi ihlala ikhona? Ngaba izithelo kunye nemifuno enomgangatho ongezantsi?
Ziziphi iintlobo zokuzivocavoca ezikhoyo? Ngaba abadlali abanokufikelela ngokulula ukusebenzisa izixhobo zokusebenza, umzila kunye nedama lokubhukuda? Ngaba i-campus ineendlela zokuhamba?
Ngaba kukho iziko lempilo kwi-campus apho ungaya khona iinkonzo ezisisiseko ezifana nokugonywa kunye nokunyangwa kwezifo eziqhelekileyo?
Ingaba ikholeji ineziko lokucebisa ukuxhasa abafundi abajongene nokuxhalaba, ukuxinezeleka, okanye ezinye iingxaki zengqondo?
Ingaba ikholeji ineenkqubo ekufundiseni abafundi malunga nokusela ngokunyanisekileyo kunye nokukhusela izifo ezithathelwana ngesondo?
Uninzi lwemiba ingenakuphakamisa uluhlu lwakho lwezinto eziphambili njengoko unciphisa ukhetho lwakho lwekholeji. Nangona kunjalo, abafundi abaphilileyo engqondweni nasemzimbeni banakho amathuba okuphumelela ekolishi kunabo abangenayo.
Uninzi lweekholeji zikhuseleke kakhulu, kwaye nakwiidolophini zasezidolophini zihlala zikhuselekileyo kuneendawo ezikufutshane. Ngelo xesha, ezinye iikholeji zinezinga eliphantsi lolwaphulo-mthetho kunezinye. Abafundi banokulinganisa iithagethi zamasela amancinci, kwaye iibhasiki kunye nokubiwa kwemoto akuqhelekanga kwiinkampu ezininzi, ngokukodwa kwizixeko. Kwakhona, xa abaninzi abantu abadala behlala kunye kunye kunye kunye kunye kunye, ukulwa nodlwengulo kungabonakala ngokuqhelekileyo kunokuba sinqwenela.
Ngokuqhelekileyo, iikampus ezinezona ziphulo-mthetho ezichazwe kwiindawo zasemadolophini. Kodwa ezinye iikholeji zibamba ukhuseleko ngakumbi kunabanye. Njengoko uphando ngeekholeji ezahlukeneyo, buza malunga nobugebengu bekampus. Ngaba kukho iziganeko ezininzi? Ingaba ikholeji inepolisa layo? Ingaba isikolo sinee-escort kunye nokukhwela inkonzo ngeentsuku neeveki? Ngaba iibhokisi zeefowuni eziphuthumayo zeenkampu zifumaneka kwiikholeji?
Ukufunda malunga neenkcukacha zolwaphulo-mthetho ezichazwe kwi-campus ethile, tyelela iCampus Safety and Analysis Data Analytical Cutting Tool eyenziwe yiSebe leMfundo le-US.
IiNkonzo eziNkxaso zeNkxaso zeMfundo
Ngamanye amaxesha ebudeni bekholeji yakho, unokwazi ukulwa nomxholo ofundayo. Ngoko njengoko ukhetha izikolo ekuya kusebenza kuzo, jonga kwiinkonzo zenkxaso yezemfundo nganye kwikholeji. Ingaba ikholeji ineziko lokubhala? Ngaba unokufumana umqeqeshi ngamnye kwiklasi? Ngaba amalungu e-faculty ayadingeka ukuba abambe iiyure zeeveki nganye? Ngaba kukho ibha yokufunda? Ngaba iiklasi zonyaka wokuqala zineengcebiso eziphezulu kunye nabo? Ngaba ezininzi iiklasi ziphonononge kwaye zifundwe phambi kweemviwo ezinkulu? Ngamanye amagama, zama ukufumanisa indlela uncedo olufumanekayo ngokufanelekileyo xa kufuneka uyiludinge.
Qaphela ukuba zonke iikholeji zifuna ukuthobela iSigaba 504 soMthetho wamaMerika aKhubazekileyo. Abafundi abafanelekayo kufuneka banikwe indawo yokuhlala ngokufanelekileyo njengexesha elide kwiimviwo, indawo zokuvavanya ezihlukeneyo, kunye nayiphi na enye into enokufunekayo ukunceda umfundi ukuba enze ngokusemandleni akhe. Nangona kunjalo, ezinye iikholeji zibhetele kunabanye ekunikezeni iinkonzo phantsi kweCandelo 504. Buza ukuba bangaphi abasebenzi abasebenzela iinkonzo zenkxaso kunye nokuba bangaphi abafundi abakhonzayo.
Uninzi lwabafundi baya kwikholeji benethemba lokungena kwinkqubo elungileyo yokuphunyezwa okanye ukuhlawula umsebenzi okhangayo ekugqibeleni. Njengoko uqhuba uphando lwakho lwekholeji, jonga kwiinkonzo zomsebenzi ngamnye wesikolo. Uluphi uncedo kunye nesikhokelo esikolweni esikubonelelayo njengoko ufaka isicelo semisebenzi, ukuqeqeshwa kwabafundi kunye nokufunda ngokugqibeleleyo? Eminye imibuzo omele uyiqwalasele:
Ingaba ikholeji izisa i-fairs foirs and graduates school fairs to campus?
Yiyiphi izinga lokubekwa kwemisebenzi kwikholeji?
Yiyiphi ipesenteji yabafundi abaya kuphumelela isikolo, kwaye ziziphi iiprogram ezamkelayo?
Ingaba ikholeji ineprogram yokunceda abafundi bafumane umsebenzi onentsingiselo ehlobo?
Ingaba ikholeji inceda abafundi ukuba babhale kwaye bahlakulele ukuqala kwabo?
Ingaba ikholeji iqhuba ukuxoxwa ngokunyanisekileyo ukubanceda abafundi bakwazi ukulungiselela into eyinyani?
Ingaba ikholeji ine-base base-alumni ebandakanyekayo ukubanceda abafundi bafumane imisebenzi?
Ingaba ikholeji inezincedisi zokunceda abafundi balungiselele iziviwo zokungena kwizifundo ezifana ne-GR, i-MCAT ne-LSAT?
Ingaba ikholeji ineenkonzo zokubonelela ngeempendulo kwizicelo zezikolo ezigqibeleleyo kunye nezitatimenti zakho?
Ingaba ikholeji inika iimvavanyo ezifana novavanyo lwaBriggs Myers ukunceda abafundi bafumane iindlela ezifanelekileyo zokufunda?
Iikholeji ezininzi zinemithombo enobungakanani bekhompyutha, kodwa ezinye izikolo zibhetele kunezinye. Kungakhathaliseki ukuba umsebenzi wezemfundo okanye ujabulele, uya kufuna ukuba ikholeji yakho ibe nezixhobo kunye nomda wendlela yokuhamba nayo eya kuhlangabezana neemfuno zakho.
Cinga le mibuzo njengoko uphando ngeekholeji:
Zingaphi iilebhu zomphakathi zifumaneka kubafundi, kwaye ziziphi iiyure zabo?
Ngaba iilabhu zinayo yonke iprojekthi ekhethekileyo efunekayo ukuxhasa umsebenzi wezemfundo?
Ziziphi iindawo zokushicilela i-campus ezifana, kwaye yintoni umrhumo wokuprinta (ukuba kukho)
Ngaba zikhona na indawo ezifayo kwi-networkus wireless network? Ngaba i-laptop yakho okanye i-Blackberry iya kusebenza kwi-campus eluhlaza kunye nakwiiholo zokuhlala?
Ngaba ezininzi iiklasi zifundiswa "kwizikolo zokufundela"? Ngaba ngaba profesa baxhamla ubuchwepheshe be-emergence?
Ngaba iiklasi ezixhaswa yi-software yolawulo lwekhosi, iinkqubo zokunikezelwa kweekholeji ze-intanethi, ii-podcasts, okanye ezinye ubuchwepheshe?
Ngaba iipttops, iprojekti, iikhamera kunye nezinye izixhobo ezifumanekayo kubafundi ukuboleka?
Ngaba i-campus bandwidth eyaneleyo? Ingaba inkqubo ikhe yahlala phantsi kwixesha eliphakamileyo?
Ingaba ikholeji inika uqeqesho lweprojekti ebalulekileyo njenge-PowerPoint, Excel, ne-PhotoShop?
Ingaba ikholeji ine "port-per-pillow" - uxhumano olunzima lwe-ethernet kuyo yonke i-hollow student student?
Xa ufaka isicelo semisebenzi okanye iiprogram zokugqibela, uya kufuna ukukwazi ukubonakalisa izakhono zobunkokeli obuqinileyo. Ngaloo ndlela, kulandela ngokucacileyo ukuba ufuna ukukhetha ikholeji eya kukunika amathuba okuphuhlisa izakhono zobunkokheli.
Ukhokelo ngumqondo obanzi onokuthatha iifom ezininzi, kodwa qwalasela le mibuzo njengoko usebenza kwiikholeji:
Ingaba ikholeji ineprogram yesatifikethi yobunkokeli okanye ithrekhi yobunkokeli?
Ingaba ikholeji inika iindibano zocweyo zokuthetha ngeentlanga okanye iiklasi?
Kulula kangakanani okanye kunzima ukuba yigosa lomdlali okanye umsebenzi?
Ngaba isikolo sineziko lobunkokheli?
Ngaba zikhona amathuba abafundi abaphezulu ukuba babe ngabafundisi, abacebisi bontanga, okanye iinkokheli zontanga kwiiklasi zokuqala?
Ziziphi amathuba okubandakanyeka nokulawulwa kwabafundi?
Ngaba iidanga zokugqibela zikhonza njenge-RA (Abacebisi bemihlali)?
Ngaba ngabafundi abangaphantsi kwezifundo baqala iiklabhu ezintsha okanye imisebenzi kwi-campus? Iyintoni inkqubo?
Ingaba ikholeji inikezela izifundo zokufundisa izakhono zobuholi?
I-Intanethi ye-Alumni Network
Xa ubhalisa kwikholejini, khawuleza udibanise nawe wonke umntu oye wafunda kule kholeji. Inethiwekhi yesiqhelo se-alumni sinesixhobo esinamandla sokubonelela ngeengcebiso, ukukhokelwa kweengcali kunye namathuba omsebenzi. Xa ukhangela iikholeji, zama ukufumanisa indlela abandakanyekayo ngayo i-alumni yesikolo.
Ingaba isikhungo sezemfundo sikhungo sizama ukusebenzisa inethiwekhi ye-alumni ye-internship kunye namathuba emisebenzi? Ingaba i-alumni yokuzithandela isakhono sabo sokuncedisa abafundi abanomdla kwimisebenzi efanayo? Yaye ngubani na umntu onobumba? -iikholeji banabantu abaneempembelelo kwizikhundla ezibalulekileyo emhlabeni jikelele?
Ekugqibeleni, inethiwekhi ye-alumni esebenzayo ithi into enhle malunga nekholeji. Ukuba ngaba abalandeli banonophelo ngokwaneleyo malunga ne-alma mater ukuba baqhubeke nokunikela ixesha labo nemali emva kokugqitywa, kufuneka ukuba babe namava ekholejini amahle.
Kufuneka Ndisebenzise Kangaphi Iikholeji?
Iiprojekthi zeNzululwazi kuzo zonke izihloko
Iinjongo ezibaluleke kakhulu kwiNguqulelo yeShishino
Imibuzo Yokubuza Njengoko Uqala I-Red Sitein
Iimpawu zoMboniso zabaQaleli
Uluhlu lwe-9 lokuFunda weBanga
Ziziphi i-e-ponies ezikhethiweyo zamahhala
I-4 Best Best Limestone Indawo yokunyuka kwiFransi
Uqeqesho lweSikolo soMthetho
Ukuthenga Imoto Eyetyenzisiweyo esuka kuMthengisi Wabucala
I-Unitedly Deadly Tornadoes
Ukudibanisa enye ye-Astronomy's Wild Men: uTycho Brahe
Umgaqo-siseko wase-US: I-Article I, iCandelo 9
I-Classic Greek Mythology: Iindaba ezivela kwi-Ovid's Metamorphoses
Uhlalutyo lwengxoxo (CA)
Ukuchonga ukuVibration kweGroke
IQela leSizwe sase-Oak Hill